Ikhonsathi emnandi kaMarco Borsato eKuip eRotterdam! : UMartin Vrijland
Ikhonsathi emnandi kaMarco Borsato eKuip eRotterdam!
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	31 Meyi 2019	• 3 Comments
Akunjalo ukuba ndibekho, kodwa kufuneka kuxoxwe: abezindaba beza kuzaliswa ngekhonsathi ehle kakhulu nguMarco Borsato eDe Kuip. Wonke amagama amakhulu namhlanje ayenayo: UDavina Michelle, Maan, André Hazes, uLil 'Kleine, uArmin van Buren kwaye mhlawumbi ndiya kulibala ezinye ezimbalwa. Kutheni ku funeka kubhekiswe? Ngenxa yokuba ijikeleza ingcamango yesonka kunye nemidlalo kwaye kunomdla ukubona ukuba amashumi abantu ahlala exakeke kangangokuba iindonga zentolongo zakhiwa kuzo. Nangona kunjalo, abaninzi abanakukufumana oku njengeendonga zeentolongo, njengoko ziyinxalenye yeqela le-mason, umthengisi, umphathi okanye umlindi wejele elitsha. Igosa elingabonakaliyo ngaphandle kwamatye kwaye kungenalo imivalo ebonakalayo kwaye akukho mntu ubonayo. Oku kunjalo kwaye asifuni ukusuleleka kukungaboni.
Andiyazi ukuba uthanda i-movie I-Truman Show ndiyibonile kwaye ngokwenene ndincoma ukubukela njengamafilimu ambalwa, uchungechunge kunye neTV njengokuba kunokwenzeka, kuba oko kuya kukubeka phantsi kwe-hypnosis. Nangona kunjalo, elo phephancwadi lithetha ngokuvuswa kweso sigxina, kodwa kuphela kuphela kwi-protagonist Truman (idlalwe nguJim Carrey). Imbonakalo yeTruman yezinto eziyinyani yinkalo encinci kwaye abaninzi abantu basebenzisana nayo kwaye baninzi abantu abaninzi abanjwe kweli qiniso lobuxoki. Yinyaniso ehambelana nepesenti yabemi kunye nabaninzi abayingxenye yomlawuli weTruman Show abanalo. Oku kungenxa yokuba i-clockwork inamalungu amaninzi kunye namaqela. Ngenxa yokuba abantu bakha i-radar kuphela, abo ngokwabo ababoni ukuba bayingxenye yecandelo lexesha leenkampani kunye nokukhohlisa. Umgca ophezulu owaziyo yinkomfa engundoqo kwaye asikwazi ukuwufumana ngokuba nesazela; ngenye indlela abayi kuhamba nale nkqubo.
Mhlawumbi ungumfundi omtsha apha kwaye uyifumana yonke into engenamsebenzi. Awucingi ukuba uhlobo lwe-Truman Show konke. Mhlawumbi uya kufumana ukuba 'ukunganaki' kwaye ufuna ukuhlala kude nabantu ababi. Uyakufumana kwakhona umboniso onjengoMarco Borsato kunye nabaculi bakhe kunye nokuba mhlawumbi nje ngokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa okucocekileyo (kuxhomekeke kwintetho yakho). Unokuziqhayisa ngemveliso enkulu eyenziwa yiNetherlands ukuba ibeke phantsi. Uyazi ukuba amaRoma nawo anike abantu isonka kunye nemidlalo, kodwa ulungile loo nto; uyayivuyela. "Sonke sihamba kakuhle!" Ucinga ukuba ingcinga yokuba intolongo yayiza kusenza sizungeze mhlawumbi iphosakele. Enyanisweni, oku kusebenza kubantu abaninzi. Yona yimpembelelo oyibonayo kwividiyo engezantsi. Khangela ngenxa yalo. Kwakhona ividiyo ehlekisayo, kuba abantu abangaphantsi kwe-hypnosis bacinga ukuba badla imango enomnandi. Ngoko ke abayithandi i-asidi ye-lemon apho bayaluma khona.
Owu anikholwa ukuba ugcinwa phantsi kwe-hypnosis? Ekuqaleni, uTruman akazange aqaphele ukuba wayebanjwe inyaniso yamanga de waqala ukuphawula izinto ezintle. Ngoku ungathi kwakhona: "Andifuni ukubona ezo zinto ziphawulekayo kwaye ndicinga ukuba kulungile ngendlela endiphilayo ngoku." Ngaphezu koko, abalindi beeTrans Show (abakhi bomsebenzi wonke we-radar ogcina oko (buchule kakhulu) baqinisekisa ukuba abantu abacinga ngokugqithiseleyo bahlaselwa ekubeni 'iingcinga zeqhinga', 'ilungelo', 'uhlanga' ukuxhaswa kwehlabathi, 'amanyathelo omelana nemozulu', 'abantu abakholelwa ukuba umhlaba uphahlale', njl njl., ngoko, awufuni ukuba yilo qela. Emva koko funda eli nqaku ngencazelo ecacileyo malunga nendlela abayenzayo ngayo.
Ngoko ukuba umele uhlale kuloo nqanaba le-hypnotist uRasti Rostelli kwaye ndiya kuphakama ndikhwaza ukuba udla lemon elimuncu kwaye i-eyinyosi lakho lezinyo lichaphazelekayo; ukuba ndiza kukubonisa ulusu oluphuzi kunye nembewu njengobungqina bokuba limon, ungandikhumbuza ukuba ndihambe ndigcine umlomo wamva. Emva kwakho konke, uyazi ngokuqinisekileyo ukuba udla imango eshushu. Ngoko awufuni ukuva mna kwaye uphakathi kweqela elingaphantsi kwe-hypnosis kunye nawe, ongenakufuna ukundiva. Akukho mntu ufuna ukuva ukuba ngokwenene badla i-lemon. Nonke nihleka kunye nam udikisayo.
Nangona kunjalo, ubungqina bubonakala bucacileyo, kodwa awufuni kwaye awukwazi ukuyibona ngenxa yokuba ingqondo yakho idlulisa ulwazi. Nangona kunjalo, i-lemon inomuncu:
Oorhulumente basebenzisa iindaba zobuxoki, iindlela zokuvelisa i-TV, ngokusebenzisa i-deepfakes kunye nobuchule beekhompyutha imisebenzi yengqondo (PsyOps) ukwenzela ukuba uvume umthetho ukuba nayiphi na ummi angakwazi ukuphuma esitalato ngaphandle kokungenelela kwesazi sengqondo okanye ijaji (bona eli nqaku en le ngcaciso kuyo). Uhla kunye nabaphikisanayo!
Ukwakhiwa kwenethiwekhi ye-5G eyenza oorhulumente benze abantu inxalenye yenkqubo yokulawula idijithali, apho i-DNA ingatshintshwa kwi-inthanethi kwaye ubuchopho bomntu bunokuxhoma kwi-intanethi (ukufunda nokubhala ngokusebenza). Oku kubanika ukulawula ngokupheleleyo kubemi. Umthetho wale nkqubo ulungiswa ngeentlobo zengxelo zengqondo zengqondo ezimele ziveze indlela yokwamkela DNA yolwazi, ukulahlwa komzimba womntu (umthetho womnikelo womzimba). Uxhumo lobuchopho lithengiswa kubantu ngakwesinye icala ingozi yokuba ingqiqo yobuchule (AI) iya kufumana kwaye ifake ingozi, ukuze sikwazi ukudibanisa ngakumbi nayo (Elon Musk) kunye kwelinye icala ngokunika isizukulwana esitsha ithuba lokufunda ngokukhawuleza kwaye, umz
Oorhulumente basebenza kwiprojekthi yokubambisana kwehlabathi. Umele ucinge nge-US ngokumelene neRashiya / iChina, kodwa kunye nobuqili bezopolitiko. Oku kubonakala kwekhohlo ukuya ngasekunene okanye umyalelo omiselweyo omdala kunye "nokuhamba kwezopolitiko ezintsha." Ngaphakathi eli nqaku Ndiyichaza ukuba, umzekelo, iipolitiko zwelonke zisebenza ngokuchasene.
Oorhulumente kwihlabathi lonke baxosha i-transgender (LGBTI) ipropaganda kuba bafuna i-transgender-transhuman world population. Inani labantu apho umgangatho wesigxina we-biological ishintshwa ngumgangatho wesini ongathathi hlangothi (ukuqala ngeentlobo zonke zokuxuba iifomu ezibizwa ngokuba yi-LGBTI); Loo mntu akayi kuphinda avelise ngendlela engokwemvelo kwaye ulawulo luya kulala kunye nombuso. Uhlobo lokungahambisani nentsholongwane nolwabelana ngesini lukwimeko yonqulo (uLuciferian, rainbow). I-oda elitsha lehlabathi leLuciferi ekwenzeni imizamo yenkolo yehlabathi ye-1, ubulili be-1 (ubulili bengathathi hlangothi kunye no-human) kunye noRhulumente wehlabathi we-1.
Uluhlu olukhankanywe ngasentla luyifomati esifutshane se-citric acid oyidlayo. Kukho okungakumbi okuqhubekayo, kodwa oku kuyingcamango encinci.
Ndicela ukuba uphume kwi-hypnosis yakho kwaye ugxininise abantu abami nawe kwisigaba seRasti Rostelli. I-Marco Borsato yeli hlabathi ikhona ukuba ikugcine phantsi kwe-hypnosis ngokusebenzisa iziphazamiso ezintle kunye nemiboniso. Ngokufihlakeleyo okanye bengayazi, bafaka isandla kwi-ajenda enkulu.
Unokubuza: Ukuba uMarco Borsato uthathe inxaxheba ngokuzibandakanya kwi-propaganda ye-transgender nge-Davina Michelle (jonga eli nqaku), ngaba uyaziqhenya ngomsebenzi wakhe kwaye ujabule ngeakhawunti egciniweyo yebhanki, eyazi ukuba abantwana bakhe bangakhetha ukutshintsha kwezesondo kwiminyaka embalwa? Ngaba nguJohn de Mol, umnini we-ANP, onwabileyo nazo zonke iibhiliyoni kwi-akhawunti yakhe yasebhanki okanye ufungela ebusuku xa ephupha ukuba unembopheleleko yeeNgxelo zeentengiso ze-PsyOp? Ngaba siya kuvuyiswa kwiminyaka embalwa njengoko siphila phantsi kolawulo lwenkqantosi? Ngaloo ndlela, nangona kunjalo, awusenalo inkululeko yengqondo (ngokoqobo, ngenxa yokuba ingqondo yakho i-intanethi) ukuze ukwazi ukucinga ngale nto.
Awusadingeki ukuba amehlo akho avaliwe. Kufuneka ungalindelanga ukuba ii-Truman Show Builders ziza kuhamba ngokukhawuleza phambi kwakho. Bafuna ukulawula okupheleleyo kubemi behlabathi abalawulwa kwilofu. Ngoko kufuneka wenze utshintsho ngokwakho! Funda apha ukuba wenza njani loo nto.
Uludwe lwekhonkco lovimba: imdb.com
UMichael P. Thijs H. Jos B. zonke iimeko zamatyala ezokubulala zikhokelela ekusungulweni ngokukhawuleza komthetho wokukrakra ochaphazela wonke umntu
Julie van Espen, waseBelgium Anne Faber kunye nombulali uSte B. uBelgium uMichael P. kwi-PsyOp yakamuva?
Positivism kunye nethemba!
U-Elon Musk malunga nenkolelo yokulinganisa, ithemba kunye 'nohambo'
tags: 2019, André Hazes, ANP, Armin van Buren, ikonsathi, Davina Michelle, eziziimbalasane, john de mol, Cockpit, Lil 'Kleine, kuthoma, Rotterdam
31 Meyi 2019 kwi-22: 33
Umyalezo obaluleke kakhulu kwiNyaniso indoda ibonisa ukuba kufuneka unqobe ukwesaba ukuphuma. Ekupheleni kwefilimu ufika eludongeni apho kufuneka anyuke khona ukuze akhululeke. Ngesinye isikhathi ekugqibeleni kufuneka angene ebumnyameni ukusuka ekukhanyeni (ukufakelwa). Okokuqala kufuneka uhambe ebumnyameni ukuze ufike ekukhanyeni kwangempela.
Kuvakala kakhulu ukunyaniseka ukuba sinyuka phezu kwodonga lweqhwa olujikeleze umhlaba wethu ukufumana ezinye i-continent ze-33. Kukho ingxaki enye kuphela ohlala kuyo kwimeko yomzimba efana neyokhoyo ngoku. Lo ngumgibe we-flat story theory, uqhubeka uvalelwe kwimeko okhoyo ngoku.
Ndicinga ukuba kukho enye indlela ephuma ngayo kwaye kukufa (ukwesaba).
Sifanele sicinge ngelo xesha elide, ngoko kulungile ukuba iqela lihlelwe rhoqo.
Namhlanje ibomvu 🎈😉
1 Juni 2019 kwi-01: 53
Iingcamango zomhlaba ezicatshulwayo inkohlakalo yobuxoki (ukungachazi kakuhle) kwimeko echithwe (ephantsi) apho thina (sicinga) siphila. Ingongoma kukuba sifumanisa ukuba siphila kwi-Luciferian simulation (umgangatho ophantsi).
1 Juni 2019 kwi-01: 54
Lapho "ubomi" akulona ilizwi elifanelekileyo. Sigcina (umdlali omninzi) ukulinganisa kunye (kwethu ukubona nokudlala) umphefumlo ngulowo ophethe umlawuli ngesandla.
« UMichael P. Thijs H. Jos B. zonke iimeko zamatyala ezokubulala zikhokelela ekusungulweni ngokukhawuleza komthetho wokukrakra ochaphazela wonke umntu
I-Thijs H. PsyOp kwafuneka yonakalise ukufihla kwezobugcisa kwaye sele sele iphumelele namhlanje »
Utyelelo lulonke: 4.140.788
ICoronavirus covid-19: esingayivayo iMaurice de Hond kunye noWillem Engel
Incwadi entsha uMartin Vrijland enesihloko esithi 'Coronavirus covid-19 iphelele phi?' ikhona ngoku
Izitebhisi ze-Escher Penrose zeqela eliphikisayo i-FvD, uWillem Engel noMaurice de Hond
NgeCawa kaJuni 28 umboniso iMalieveld uthando, unyamezelo kunye nentembelo yokuphepha ukhuseleko lwe-Virus Madness
Zenza ntoni izinto eziMnyama kuBomi boMnyama, i-LGBTI kunye nogonyo oluyimfuneko lwe-Covid-19?
UMartin Vrijland op ICoronavirus covid-19: esingayivayo iMaurice de Hond kunye noWillem Engel
UMartin Vrijland op I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani?
AnOpen op ICoronavirus covid-19: esingayivayo iMaurice de Hond kunye noWillem Engel
Adriaan W op I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani?
guppy op Incwadi entsha uMartin Vrijland enesihloko esithi 'Coronavirus covid-19 iphelele phi?' ikhona ngoku